Banaabaxyo iska soo horjeeda oo ka dhacay Dalka Yemen. – SBC
Banaabaxyo iska soo horjeeda oo ka dhacay Dalka Yemen.
Sanca- Maalinimadii shalay oo ku beegnayd Jimce ayaa ahayd mid kamid ah maalmihii ugu xooganaa ee ay banaabaxyo ka dhacaan dalka Yemen,iyadoona kumanaan qof ay isugu soo bexeen Magaalooyin badan oo ka tirsan Dalka Yemen.
Banaabaxayaasha Kacdoonka wada ayaa ugu magacdaray Banaanabaxyadii shalay Jimcadii dhimashada,iyadoona dhowr iyo tobon qof ay ku dhinteen banaabaxyadaasi.
Taageerayaasha Madaxweyne Cali C/lla Saalax oo laga tira badan yahay ayaa isugu soo baxay xarunta dalkaasi ee Sanca,iyagoona u muujinayay Madaxweyne Saalax in ay doonayaan sii joogitaankiisa.
Mudaaharadayaasha diidan Madaxweynaha Yemen ayaa weli ku adkaysanaya in ay wadayaan socodka banaabaxa,iyadoona tan iyo inta uu xilka ka degayo Cali C/lla Saalax aanay meelna uga socon goobaha ay haatan ku sugan yihiin.
Waxaa ay sheegeen banaabaxayaashu in ay dhiigooda u hurayaan sidii ay isaga hor dhaqaajin lahaayeen,madaxweynaha mudada dalkaasi ka talinayay,iyadoona xataa hadii uu iscasilo aanay dayn doonin maxkamadna ay la tiigsan doonaan.
Wadanka Yemen ayaa kamid ah,wadamada ay ka socdaan mudaaharaadyada isbadaldoonka ah ee dalalka carabta,waxaana tan iyo intii ay bilowdeen banaabaxyada dalkaasi ka socda ku dhintay in kabadan Kun qof.